Ihe Niile Gbasara Igwe Ojii, October 2021
uru nke mgbatị na nrụgide
Uru nke mmega na nrụgide - otu esi edozi
Ego ole ka mmega ahụ na-ebelata nrụgide? Ndị ọkà mmụta sayensị achọpụtawo na itinye aka na mmega ahụ na mbara igwe egosiputala iji belata nkụda mmụọ zuru oke, bulie ma mee ka ọnọdụ dị jụụ, melite ụra, ma bulie ùgwù onwe onye. Ọbụna nkeji ise nke mmega ahụ aerobic nwere ike ịkpalite nsogbu nchegbu.
French ịgba ígwè okwu
Kedu ihe chapeau pụtara na ịgba ịnyịnya? 'Chapeau' sụgharịrị ịbụ 'okpu' mana ọ pụtara karịa. Ejiri iji gosi nkwanye ugwu maka mbọ, mmezu ma ọ bụ mbọ Chapeau! bu ihe akpuru akpu nke okpu. Nkwanye ugwu na agbamume bu agwa ndi anyi na acho ime.
Mgbatị ahụ dị nkeji iri ọ dị irè? Site na iji mgbatị na mgbatị na -eme oge 10, ị ga - enwe ike inye ahụ gị ihe ọ ga - eme iji mee ka ị na - emegharị ahụ, na - arụ ọrụ ahụ, ma na - amụba ikike gị. Nkeji iri kwa ụbọchị zuru iji nye gị mgbatị dị ukwuu. 2021 г.
-esi mee ka a n'aka ekpe n'aka
Otu esi eme ka aka ekpe tụgharịa - ịza ajụjụ ndị a
Kedu mgbe ị ga - eme ka aka ekpe tụgharịa? Nwere ike ịtụgharị aka ekpe ka ọ bụrụ ụzọ a na -emegharị aka ekpe, nke nwere otu ụzọ ma ọ bụrụ na enweghi akara iji gbochie uzo a. Nyere ndị ji ụkwụ, ndị ịnyịnya ígwè, ma ọ bụ ụgbọ ala ndị ọzọ na-agagharị na ndụ ha akwụkwọ ndụ. Iji gbanwee ụzọ ziri ezi, ụgbọala gaa n'akụkụ aka nri nke ụzọ.
mmega ahụ na dumbbells
Ab mmega na dumbbells - mfe azịza nke ajụjụ
Ndi dumbbells dị mma maka abs? Y’oburu n’ichicha ime akpa isii gi, ikwesighi ime mgbatị ahụ dum juputara na akụrụngwa. Nwere ike iji ụyọkọ gia ma ọ bụrụ n'ezie ịchọrọ - mana ị nwere ike iji naanị otu dumbbell mee ka isi gị dị mma. Ha na-achọ naanị otu ụda olu, ha na-agbanye akwara nile nke mgbidi afọ na ala azụ. 30.10.2018
Velodromes london - otu esi edozi
Ebee ka e nwere velodrom na UK? Ntuziaka Velodrome UK: the 10 best public tracks1. Lee Valley VeloPark, London. Herne Hill Velodrome, London. Cygba ígwè National Velodrome, Manchester. Wales nke mba Velodrome, Newport. Sir Chris Hoy Velodrome, Glasgow. Caird Park Velodrome, Dundee. Calshot Velodrome, Okechukwu. Derby Velodrome, Midlands.
nyochaa okpu agha
Nyocha okpu agha Limar - azịza ya
Okpu agha Limar ọ dị mma? Na mkpokọta, Limar Air Speed ​​nwere ụfọdụ atụmatụ dị mma yana oke ikuku ya meriri otu n'ime nkatọ bụ isi nke ọtụtụ okpu agha. Achọpụtara m na enweghị m obi iru ala, nke mere ka ọ bụrụ ihe ọma nye m, mana ị nwere ike ịmalite ya nke ọma ma ọ bụ nwee obi ụtọ ịchụ nkasi obi ụfọdụ maka uru aero. 2020.
Ikgba ugwu - azịza na ajụjụ
Inggba ugwu n’elu ugwu dị egwu? Mgbada ugwu na-agbago bụ ụdị kachasị njọ nke ịgba ugwu. Na-agbakarị elu ma ọ bụ banye n'ụgbọelu gaa n'elu ugwu. Ma njem gị ga-amalite na mkpọda ugwu ahụ. Ugwu ugwu nke ugwu na-eweta ihe egwu nke nwere ike itinye onye na-agba ya n'ọnọdụ di ize ndụ.
hangry bu ezigbo ihe
Bụ hangry bụ ezigbo ihe - otu esi edozi
Inweta Hangry ọ bụ n'ezie ihe? Na-atụgharị, ịbụ hangry bụ ezigbo ihe. Ikekwe nke ahụ bụ ihe dugara na ntinye ya na Oxford English Dictionary na mbido afọ a, nke na-akọwa nsị dị ka onye nwere obi ọjọọ ma ọ bụ mgbakasị n'ihi agụụ. Mana ịnọkọbụ ebe abụghị naanị iwe iwe n'ihi na agụụ na-agụ gị, ndị nyocha kwenyere. 25.09.2018
Gini mere mmanu olive ji adighi gi nma? Mbara abụba dị n'ọbara mgbe nri bara ụba nwere abụba - gụnyere nri jupụtara na mmanụ oliv - nwekwara ike merụọ akwara anyị ma kwalite ọrịa obi n'ihi na ha na-abawanye mbufụt.
kedu ihe ọsụsọ
Kedu ọsụsọ - edepụtara ajụjụ na azịza
Kedu ihe dị gị ọsụsọ? A makwaara ọsụsọ dị ka ọsụsọ (kwuo: pur-spuh-RAY-shun), a na-emekwa ya ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmiri kpamkpam, yana obere kemịkal ndị ọzọ dị ka amonia (kwuo: uh-MOWN-yuh), urea (sị: yoo -REE-uh), nnu, na shuga. (Amonia na urea na-ahapụ mgbe ahụ gị mebiri protein.)
obere abụba nri testosterone
Usoro abụba na-eri obere abụba - ihe ngwọta dị irè
Ndi abụba na-ebelata testosterone? Ebe ọ bụ na testosterone bụ mmiri ọgwụ steroid nke sitere na cholesterol, mgbanwe na oriri abụba nwere ike ịgbanwe ọkwa testosterone. Nyocha ọhụrụ a banyere otu nri si emetụta testosterone na-enye ihe akaebe na a na-ejikọta nri nwere obere abụba na ogo testosterone dị ala, ma e jiri ya tụnyere nri a na-egbochi .10 янв. Afrịka 2020
esi agba igwe kwụ otu ebe
Etu esi agba igwe kwụ otu ebe - otu esi edozi ya
Kedu ihe ndị a na-eme iji na-agba ịnyịnya ígwè? Kụziere ụmụaka gị ihe ị ga-eme na 10 Nzọụkwụ Nke ahụ pụtara okpu agha kwesịrị ekwesị, ikpere ụkwụ, na ikpere aka iji chebe nwa gị pụọ na 'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ' ahụ. Mee ka oche ahụ dị elu. hold jidere, ha na-azọ ụkwụ. Were nwayọ wepụ aka gị. Megharịa! Were ezumike. Welite oche ahụ. Nna ukwu onye mgbago.
jiri nwayọ agba ịnyịnya
Cycgba ọsọ na-adịghị - otu esi edozi
Kedu ọsọ ọsọ na-agba nwayọ? Nkezi ọsọ - na-egosi Mbido, dị mkpirikpi (kwuo 10-15 kilomita): nkezi ọsọ 12 mph. Ọtụtụ ndị na-agba ịnyịnya ígwè nwere ike nweta 10-12 mph nkezi ọsọ ọsọ na ọzụzụ pere mpe. Ahụmahụ ọzọ, dị mkpirikpi ọkara (kwuo 20-30 kilomita): nkezi 15-16 mph. Ahụmahụ ezi uche dị na ya, ọkara (kwuo 40 kilomita): nkezi gburugburu 16-19
Peloton seattle - Akwụkwọ ntuziaka zuru ezu
Ego ole ka Onepeloton na-efu? Peloton Bike vs. Peloton Bike + isi priceNdebanye aha (kwa ọnwa) Peloton Bike $ 1,895 $ 39 Peloton Bike + $ 2,495 $ 3917. 2021.
Emanuel buchmann - esi ekpebi ihe
Ebee ka amụrụ Emanuel Buchmann? Emanuel Buchmann / ebe amụrụ
Aero okirikiri - pragmatic ngwọta
Kedu ihe Aero pụtara na ịgba ịnyịnya ígwè? Igwe ugbo elu
akpaetu ahu anataghi
Moss nke ahu anataghi - ihe ngwọta nye nsogbu
Kedu ihe bụ oge nfụkasị ebu? Ihe nfụkasị nke nfụkasị si na ero ero bụ nke a na-ahụkarị site na July ruo mmalite ọdịda. Ma dịkwa ka usoro ha na-eto n'ọtụtụ ebe, ma n'ime ụlọ ma n'èzí, yabụ mmeghachi omume nfụkasị ahụ nwere ike ịpụta n'afọ niile.
gt triangle ụzọ igwe kwụ otu ebe
Gt triangle ụzọ igwe kwụ otu ebe - otu esi edozi
Kedu ihe bụ Triangle GT Triple? Igwe igwe GT na-aruputa ma meputa igwe BMX, ugwu, na uzo igwe. A na-ahụ GT maka atụmatụ BMX dị iche iche na 'triangle triplele' siri ike-ọdụ ugwu igwe kwụ otu ebe ebe oche ga-adaba na downtube ma tinye ya na tube elu nke oche oche, karịa na oche oche ahụ. .
Kedu ihe bụ strava on fitbit - mkpebi ndị dị irè
Akwa n'ime ube oyibo - mkpebi ndị dị mkpa
Oge awa na-agba ịnyịnya ígwè - otu esi enweta
Igwe nche anwụ - otu esi edozi
Uzo ikuku na-eri kwa awa - azịza nkịtị
Mkpụrụ osisi na-edozi n'ụlọ - ngwọta bara uru
Ndebanye aha nke ịgba akwụkwọ - otu esi eme mkpebi
Stevens gbara ajụjụ ọnụ - ịza ajụjụ ndị ahụ
Kangaroos akpụkpọ ụkwụ nyochaa - ngwọta bara uru
Otu ụkwụ na-esighi ike karịa ndị ọzọ - ihe ngwọta na-adịgide adịgide
Hsbc nkwado - mmezi usoro emere ihe
Nyocha Tifosi podium - Ngwọta na-adịgide adịgide
Ọtụtụ egwuregwu na-agwụ ike iji lelee - mmeghachi omume pragmatic
Bulletproof nri tupu na mgbe foto - esi mee
Turbos kacha mma - olee otu ị si ekpebi
Mkpụrụ miso dị mma - kedu ka ị si ekpebi
Standover elu ụzọ bike - chọọ ihe ngwọta
Amazon prime day gopro - olee otu ị si ekpebi
Bikgba ụkwụ ụkwụ - otu esi edozi
Gba ọsọ mkpakọ sọks - ngwọta bara uru
Etu esi etinye butter - mkpebi ndị dị mkpa
Shimano xt m8000 - chọọ nyocha
Trek 7.1 fx ibu - ihe ngwọta nye nsogbu
Gbanwee ụwa - olee otu ị ga-esi dozie
Tour de France sprints - ngwọta bara uru
Cinelli ahụmahụ nyochaa - viable ngwọta
Bikezọ ụgbọ okporo ígwè na-enyocha - azịza ndị nwere ike
Best kacha mma ntachi obi n'okporo ụzọ 2016 - nyocha zuru ezu
Plyometrics maka ogwe aka - kedu ka anyị si edozi
Ọ bụ iwu na-akwadoghị ịnya ịnyịnya ígwè na-enweghị okpu igwe - onye ndu kachasị